China Tactical-eji egbe egbe akpa 38 inch ogologo emeputa na soplaya |Lousun
* Akwa siri ike --- arụrụ arụ ọrụ siri ike 600D oxford w.PVC mkpuchi 2 ugboro,waterproof, inogide, akwa na-eguzogide.
* Padding --- Ejiri EPE ọkpụrụkpụ 1.8cm nwere ezigbo njupụta na ngbanwe.
* Ngwa ngwa --- Na akwa siri ike na-eyi webbing na-ebu eriri na ubu gbasiri ikeeriri n'akụkụ azụ.Site n'ụzọ abụọ zippers, metal D-mgbanaka, ezi veclro, arọ kpara teepu, plastic buckles na ezi ike, metal nko, wdg elu ngwa.
*Nhazi siri ike ma dị irè --- N'ihu, e nwere'sa nnukwu n'akpa uwe, n'ime na 3 mag pouch akpa na a nnukwu akpa.N'akụkụ azụ nke akpa egbe, e nwere'sa waterproof nzere akpa ego maka ID kaadị ma ọ bụ ndị ọzọ.N'ime, e's patches iji dozie egbe site na velcro.
Uru:1.Anyị nwere usoro ụkpụrụ dị mma, dị anyị nwere 36'', 42'', 45'', 46'',51'',52''na 55'', nke kacha bụ 55''ogologo, na mkpụmkpụ bụ 36''ogologo, dabere na arịrịọ gị anyị nwere ike imeahaziri.
2.Quantities, nke mbụ na-agbanwe agbanwe, na ihe anyị na-echekwa.
3.Na ngwaahịa, e's ọtụtụ agba maka arọ ọrụ ulo oru 600D, eg OD, GY, woodland
4.camouflage, coyote, nwa na wdg, ị nwere ike ịhọrọ agba kwesịrị ekwesị.
5.N'ihi na padding, site EPE ukwuu n'ime, na mgbe ụfọdụ anyị tinye EVA maka zoro ezo padding ka ịgbakwunye na-agbanwe nanjupụta, Maka padding na-adịghị ahụ anya, anyị mere mgbalị ndị ọzọ iji mee ka ọ bụrụ ihe na-emepụta ihe, nke mere na, mgbe ejiri ya, akpa egbe dị nro na-enwekarị ụkpụrụ iji mee ihe, ma nwee nkwupụta dị mma na njedebe njedebe.'obi s.
A na-eji akpa egbe eme ihe maka agha agha na agba égbè, yana EPE + PVA padded iji chebe egbe site na ịdọka, ịcha na wdg.enweghị atụihe mberede.
Nke gara aga: OEM ịchụ nta / agbapụ waterproof akpa egbe 47 inch ogologo
Osote: Ịchụ nta n'èzí / ịgbapụ / Ịkụ azụ mmiri oche na-adịghị
mgbọ egbe agba mgbọ
akpa egbe agha
Akpa akpa égbè agha
mgbọ egbe agha
kenkwucha abụọ egbe akpa
Akpa egbe eji eme nka
Akpa Gear Tactical
kenkwucha egbe ikpe
Akpa ogologo egbe nke akọ
kenkwucha agha gia akpa
Akpa égbè akọ
Ịchụ nta agbapụ waterproof oxford ákwà pisto ...
Ịchụ nta mmiri anaghị egbochi mmiri ojii & agba uhie...
Tactical Military Waterproof HK G36 égbè akpa 3...